व्यावसायिक पोर्टफोलियो कसरी बनाउने | क्रिएटिभ अनलाइन
मेरी गुलाब | | ट्यूटोरियलहरू
धेरैजसो चीजहरू जस्तै, अनुभव प्राप्त गर्ने काम प्राप्त गर्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक हो। काम नगरी अनुभव पाउन सकिँदैन । यो प्राप्त गर्न गाह्रो कुरा जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यहाँ यो गर्न को लागी एक तरिका छ: राम्रो व्यावसायिक पोर्टफोलियो संग।
En la वास्तविकidad, को भर्तीकर्ताहरू आवश्यकताieren que को उम्मेदवारatosaun puEsto वर्तमानen un पोर्टफोलियो प्राध्यापकesआयोनल. द्वारा lo tanto, es महत्त्वपूर्णe tener en el पोर्टफोलियो lo m.s compleलाई स्थानible. तपाईंले जान्नको लागि पालना गर्नुपर्ने चरणहरू यहाँ छन् एक पेशेवर पोर्टफोलियो कसरी बनाउने।
1 हामीले सुरु गर्नु अघि..., पोर्टफोलियो के हो?
2 व्यावसायिक पोर्टफोलियो सिर्जना गर्न पछ्याउने चरणहरू
2.1 तपाईको पोर्टफोलियोको ढाँचा छान्नुहोस्
2.2 यसलाई सरल र सीधा बनाउनुहोस्
2.3 उत्तम कार्यहरूको चयन गर्नुहोस्
2.4 तपाइँको परियोजनाहरु लाई एक व्याख्या संग साथ दिनुहोस्
2.5 आफ्नो बारेमा एउटा खण्ड थप्नुहोस्
2.6 आफ्नो पोर्टफोलियोमा ब्याज थप्नुहोस्
2.7 प्रत्यक्ष सम्पर्क फारम समावेश छ
हामीले सुरु गर्नु अघि..., पोर्टफोलियो के हो?
Un पोर्टफोलियो es una coleccin de Las mejअयस्स् cosas que घासas वास्तविकizहलचल, es दिसम्बरir, tu mejor trabलसुन. M.s o मानिसहरूos, तपाईंको पोर्टफोलियो एक लघु क्यारियर जस्तै छ. Todo lo que tengas en él हुनá lo que tú tengas que पुलrar लागि conseguir तपाईंको भविष्यका ग्राहकहरू वा तपाईंको काममा।
र अब तपाईलाई थाहा छ यो के हो, तलका चरणहरू पालना गर्नुहोस् तपाईको सिर्जना गर्न:
व्यावसायिक पोर्टफोलियो सिर्जना गर्न पछ्याउने चरणहरू
Primero, तपाईले काम गर्न चाहनु भएको रोजगार बजारको राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुहोस्. Así, पोडr.s परिभाषितir qué टिपo de trabलसुन quieरिजोल्युसन desempeñar, qué अधिनियमividएड्स वास्तविकizar.s, qué टिपo de empयात्रा Está inteरिजोल्युसनada en विरुद्धअतर व्यक्तिगत de tu सेक्टर, आदि.
प्रयोगकर्ताहरूलाई सधैं तपाईंको पोर्टफोलियो मार्फत तपाईंको काम र सेवाहरू बुझ्न अनुमति दिनुहोस्। यस कारणको लागि, यो सबै भन्दा राम्रो छ एक विश्लेषण गर्नुहोस् र सोच्नुहोस् कि तपाईंको कागजातले प्रश्नहरूको जवाफ प्रदान गर्दछ तपाईंको ग्राहक वा कम्पनीहरूले गर्नेछन्:
तिमी अहिले के गर्दैछोै?
कस्ता परियोजनाहरू गर्नुभएको छ ?
किन तिनीहरूले तपाईंलाई भाडामा लिनुपर्छ?
तपाई यसलाई कुन ढाँचामा प्रस्तुत गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
तपाईको पोर्टफोलियोको उद्देश्य के हो?
तपाईको पद्धति के हो ?
तपाईको पोर्टफोलियोको ढाँचा छान्नुहोस्
पोर्टफोलियो प्रस्तुत गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, तर आज, सबैभन्दा आकर्षक र रचनात्मक डिजिटल होजस्तै Behance, Wix, कार्यस्थान, WordPress, कार्गो वा Ionos। पोर्टफोलियो सिर्जना गर्दा यी उपकरणहरू धेरै उपयोगी छन्। यसलाई डिजिटल रूपमा सिर्जना गरेर, तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु वा कम्पनीहरु लाई तपाइँलाई फेला पार्न र तपाइँ संग काम गर्न को लागी सजिलो बनाउनुहुन्छ।
तपाईं पनि परम्परागत ढाँचा जस्तै PDF प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियो पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, यदि त्यो मामला थियो।
यसलाई सरल र सीधा बनाउनुहोस्
तपाईले ध्यानमा राख्नु पर्ने केहि कुरा तपाईको हो उद्देश्यहरू, तिनीहरू प्रत्येक खण्डमा राम्रोसँग परिभाषित हुनुपर्छ। तपाईंले देखाउन चाहनुभएको विभिन्न खण्डहरूमा आधारित संरचना सिर्जना गर्नुभयो भने यो सजिलो हुनेछ। डिजाइनको सन्दर्भमा, यो सफा र आकर्षक हुनुपर्छ, पहिलो छापहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।
उत्तम कार्यहरूको चयन गर्नुहोस्
तपाईंको पोर्टफोलियोको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्ड यहाँ छ: तपाईंको काम। तपाईंसँग भएका उत्कृष्ट परियोजनाहरूको संकलन बनाउनुहोस्, किनकि ती सबै देखाउन सजिलो छैन। तपाईंले ती छनौट गर्नुपर्छ व्यावसायिक प्रोफाइलमा राम्रो फिट उक्त कम्पनी वा ग्राहकहरू जसलाई तपाइँ तपाइँको सेवाहरू प्रस्ताव गर्न चाहानुहुन्छ द्वारा माग गरिएको छ।
तपाइँको परियोजनाहरु लाई एक व्याख्या संग साथ दिनुहोस्
अघिल्लो खण्डसँग लिङ्क गर्दै। तपाईंले छनौट गर्नुभएका कामहरू परियोजनाको बारेमा स्पष्टीकरणको साथ हुनुपर्छ। आदर्श रूपमा, यी व्याख्याहरू परियोजनाहरूको छेउमा पोस्ट गरिनु पर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले दिमागमा राख्नु भएको छ, परियोजनाको उद्देश्य, यसको विवरण र तपाईंले यसलाई पूरा गर्न प्रयोग गर्नुभएको सीप र उपकरणहरू। तपाईंले खातामा लिनु पर्छ, तपाईंले प्रत्येक परियोजनाबाट चयन गर्नुभएको छविहरू, यी राम्रो गुणस्तरको हुनुपर्छ र प्रत्येक परियोजनाको व्याख्यासँग अनुरूप हुनुपर्छ।
आफ्नो बारेमा एउटा खण्ड थप्नुहोस्
कामहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तर कसले गर्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि यो धेरै स्पष्ट छ कि तपाई को हुनुहुन्छ, तपाई के गर्नुहुन्छ, किन र कसरी गर्नुहुन्छ। यो जहाँ तपाईं आफ्नो रिज्यूम र सामाजिक मिडिया प्रोफाइल थप्न सक्नुहुन्छ।
यस खण्डमा, तपाईंले आफ्नो कार्य अनुभव कम्प्रेस गर्नुपर्दछ, साथै आफ्नो व्यावसायिक करियरको वर्णन गर्नुपर्दछ, र तपाइँलाई तपाइँका बाँकी प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा के फरक बनाउँछ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ।
आफ्नो पोर्टफोलियोमा ब्याज थप्नुहोस्
तपाईंका उपलब्धिहरू वा सहभागिताहरू विभिन्न परियोजनाहरूमा तिनीहरूले तपाईंलाई थप विश्वसनीयता प्राप्त गर्न सक्छन्। मानौं कि एक तरिकामा यो तपाइँको कार्यप्रणाली र तपाइँको सीपहरूलाई समर्थन गर्ने तरिका हो। तपाईंले आफ्नो कामलाई अझ सान्दर्भिक बनाउन तपाईंसँग काम गरेका व्यक्तिहरूबाट प्रशंसापत्रहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्यक्ष सम्पर्क फारम समावेश छ
तपाइँले तपाइँलाई कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा धेरै स्पष्ट छ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। या त इमेल मार्फत, फोन द्वारा, आफ्नो वेबसाइट वा Linkedin द्वारा। यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाइँ सम्पर्क खण्ड को लागी एकल पृष्ठ वा ट्याब बनाउन।
अब जब तपाइँ तपाइँको पोर्टफोलियो सिर्जना गर्न सुरु गर्न जान्नुहुन्छ, यो व्यापार मा तल जाने समय हो। खुसी हुनुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » व्यावसायिक पोर्टफोलियो कसरी बनाउने
नि: शुल्क लाइटरूम प्रिसेटहरू
शीर्ष 10 ग्राफिक डिजाइन कम्पनीहरू